Ngubani Ogcina Izithombe Zami Ku-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
June 16, 2019 0 Comentarios 6874
Ku-Instagram sabelana ngezithombe namavidiyo amaningi, ngokujwayelekile sithanda ukubuka abanye abantu besabela kokuqukethwe esikulayishayo, okukhombisa ukuthi bayakuthanda noma bayaphawula ngakho. Kepha bazi ukuthi ubani osindisa izithombe zami ku-Instagram Ungomunye wemibuzo abaningi bethu abanayo ngenkathi sisepulatifomu.
Kwesinye isikhathi kungaba ezokuphepha noma ukwazi umthelela isithombe esivelisayo ezilalelini zethu. Kunoma yikuphi kwalawa macala sizokusiza ekutholeni enye indlela engcono kakhulu engezansi.
Ungazi kanjani ukuthi ubani osindisa izithombe zami ku-Instagram?
Okokuqala, ayikho indlela yokwazi ukuthi ngubani ongagcina okuqukethwe okulayisha ku-Instagram kusuka ku-akhawunti yomuntu siqu. Kepha mhlawumbe uzwile ngezinye zezinhlelo zokusebenza ongazilanda ku- "App Store"noma ku"Isitolo PlayKunoma ikuphi, ngiyaxolisa ukukutshela ukuthi akekho kubo ozokusebenzela.
Bangase baphakamise nokuthi useshe i-intanethi ukuthola amanye amaqhinga noma imamoma, futhi nesixazululo. Eqinisweni, kuze kube manje kunendlela eyodwa kuphela yokwazi ukuthi ubani osindisa izithombe zami ku-Instagram.
Shintsha okwakho kube yiprofayili yebhizinisi
Le ndlela ukuphela noma enye indlela i-Instagram ekunika yona, futhi kulula kakhulu ukuyenza ngezinyathelo ezimfushane.
Faka iphrofayili yakho ku-Instagram bese ucindezela imigqa noma amachashazi amathathu angakwesokudla phezulu.
Uma ungaphakathi, cindezela "Izilungiselelo" bese kuvela imenyu yokudonsela phansi.
Khetha "Ama-Akhawunti" bese ucindezela inketho yokugcina ethi "Shintshela ku-akhawunti yebhizinisi" o "Shintshela ku-akhawunti yebhizinisi."
Lapho inqubo isilungile unga bazi ukuthi obani abagcina izithombe zakho. Empeleni, kusukela kulo mzuzu kuqhubeke uzoba nezibalo zephrofayili yakho, lapho-ke njalo lapho umuntu egcina noma yiziphi izithombe zakho kuzovela njengesaziso, futhi ukwazi ukuthi bangaki abantu abakwenzile, kufanele ucindezele u- "Statistics" bese uhlu luzovela bonke abasebenzisi.
Lezi zibalo zingaphezu kwezexwayiso osindise noma yiziphi izithombe zethu, asetshenziswa kabanzi ukwazi umthelela wokuthi ukushicilelwa kukhiqiza izilaleli ezikubukayo. Empeleni, abantu abaningi abanomthelela kule nkundla yokuxhumana Basebenzisa lo msebenzi ukukala ikhwalithi yezithombe namavidiyo abo. Ngalesi sizathu sizokuchazela ukuthi lezi zibalo zihlanganisa ini nokuthi zingakusiza kanjani.
Sebenzisa izibalo ukwazi ukuthi ngubani owagcina izithombe zami ku-Instagram.
Uma ufuna ukwazi ukuthi izithombe ezinhle ozifakayo zibonakala zinjani kuzithameli zakho noma kubangani bakho, izibalo zikusiza ukuba wazi le miphumela, kusukela Bangaphezu kokwazi idatha yabalandeli nokusebenzisana.
Kepha kufanele kuqashelwe ukuthi abantu abaningi basebenzisa lezi analytics ukuthola imininingwane eminingi kulabo ababalandelayo nakubantu abaphendulayo kuma-akhawunti abo e-Instagram. Futhi yize iningi lalaba bantu lisebenzisa ezinye izinhlelo zokusebenza ukuthola lonke lolu lwazi, ngaphandle kokungabaza, I-Instagram iyona enikeza idatha ethembekile kunazo zonke.
Kunezinhlobo ezintathu ze- "Statistics" ku-Instagram: leyo ye-General Company Profile, leyo ye-Publications kuma-Company Profiles nalezo ze-Instagram Stories.
I-Instagram post izibalo
Ukwazi ukuthi ngubani osindisa izithombe zami ku-Instagram ungaqondiswa yile nketho, yona ekunikeze ukufinyelela kwizibalo ezijwayelekile ze-akhawunti. Ungase futhi ubone izibalo kwencwadi ngayinye ngendlela ethile.
Isikhathi othola ngaso lezi zibalo masonto onke, inqubomgomo yesikhulumi isimise kanjalo futhi kuze kube manje akukho ukulungiswa okwenziwe kuyo. Ngamanye amagama, lapho wenza umbiko noma umbiko wanyanga zonke kule nethiwekhi yokuxhumana nabantu, kufanele ugcine "ama-skrini" masonto onke.
Ukuhlaziywa kwezibalo ze-Instagram
Amamethrikhi asindisa lezi zibalo angabukwa emhlabeni jikelele kepha ngokufana kwalokho Ngamunye ugcwalisa futhi athuthukise umsebenzi ohlukile. Ngokungezelela kubo okwenza kube lula ukugcizelelwa kwamaqiniso, ngokwesibonelo: uma icala lakho elingelenkampani edinga ukukhiqiza ukuthengisa okuningi futhi ithole amakhasimende amaningi, udinga ukwazi ukuthi umthelela womkhiqizo wakho ubangelwa yini, ukutholwa komphakathi namandla womkhankaso wakho Ngendlela efanayo kwenzeka nangezinto ezibuthakathaka oziphethe, ukuze wazi lapho umzamo wakho nesikhathi sakho kufanele kugxile ekutholeni amathuba amaningi.
Ngakolunye uhlangothi, uma ngandlela thile uzibuza umbuzo wokuthi "ngubani ogcina izithombe zami ku-Instagram" kungenxa yokuthi ufuna ukwazi ukuthi okuqukethwe okushicilelayo kukuhle kangakanani, ngandlela thile ufuna ukuzijabulisa wena nalabo abakulandelayo. Kunoma ikuphi, izibalo ze-Instagram zikusiza ukuthi wazi ikhwalithi yalokho ochitha isikhathi nemali kukho.
Ukuze uqonde ngisho nangokwengeziwe ukuthi lemetwork imayelana nani, sizokuchazela ikakhulukazi emigqeni elandelayo.
Yize ezitolo zokufaka izicelo kukhona "amathuluzi" amaningi athi ukukunikeza lonke ulwazi mayelana nokusebenzisana, ngiyazisola ukukutshela ukuthi kungamanga, Okungakusiza kakhulu ukucabanga ngokuthandwa "nangamazwana abekiwe. Ngakho-ke kuhlelo lokusebenza lwe-Instagram kanye nezibalo kuphela ongabazi abasindisiwe, ukukhiqizwa kabusha kanye nokuchofoza kusixhumanisi se-bio.
Konke lokhu kusebenzisana kuboniswa yizibalo ze-Instagram, futhi kuyisiqondisi esikhulu kulabo abafuna ukwazi ukuphendula kwezithombe namavidiyo abo.
Khulisa abalandeli ngokuposa
Kulezi zibalo ze-Instagram kunesigaba esithi "Izenzo" lapho ungabona okulandelwayo. Futhi kungenxa yalolu lwazi esingakwazi bazi uma izincwadi zethu zisebenza njengogwayi ukuthola abalandeli abasha ngemuva kokulayisha eyodwa yabo.
Leli linani labasebenzisi ababonile ukushicilelwa kwakho, ukushicilelwa ngakunye kubonakalisa isilinganiso. Kepha lokhu kukalwa njalo ngenyanga, ngokucacisa ukuthi uzobe ufaka isamba sabalandeli abaningana abasabela ekushicilelweni kwakho, okungukuthi, ukuthi uzophinda abanye abantu, ngakho-ke lesi silinganiselo siyohlala sikhulu kuneseqiniso futhi yilokho okufanele unake.
Igama "ukuzibandakanya" lisho iphesenti lokuphendula kokuxhumana okungenziwa ngumsebenzisi kuzisusa ezicasuliwe, kulokhu, isithombe, isithombe, ividiyo.
Izibalo zizokunikeza imininingwane ngeviki eledlule, futhi lapho ufuna ukwenza umbiko we-Instagram wenyanga, kufanele ube nezibalo zesonto ngalinye.
Izinga lokuguqulwa kubalandeli
Ukuvakashela iphrofayli kuhlinzeka ngemininingwane efanelekile kunendlela ocabanga ngayo, ngoba bonke abalandeli abasha kufanele bafake iphrofayili yethu ukuze bacindezele inketho okufanele bayilandele. Lokho kusho ukuthi uma umuntu engena kuphrofayela yakho futhi ekulandela, ukuguqulwa kwabalandeli kubangelwa.
Ngobuchwepheshe obukhulu, kunendlela yokwazi ukuthi leli phesenti lokuguqulwa lichazwe ngokuthi: inani labalandeli abasha phakathi kwenombolo yokuvakasha kwephrofayili nge-100%.
Ukuvakasha kwephrofayili kusuka ezincwadini zethu
Izibalo futhi zisivumela ukuthi sazi ukuthi ngubani obuka iphrofayili yethu kokuqukethwe esikulayishile. Ngamanye amagama, lolu lwazi lusivumela ukuthi sazi ukuthi zingangaki izithombe namavidiyo wethu. Ukusabela okuhle umuntu angalindela ukuthi ngemuva kokubonwa kokuqukethwe kwayo, umsebenzisi uthatha isinqumo sokukulandela. Eqinisweni Lokhu ngukusebenzisana esifuna ukukhiqiza njengenhloso enkulu.
Ngalo lonke ulwazi izibalo ze-Instagram ezinikela ngalo kuze kube manje, "ifaneli yokuguqula" edumile ingenziwa. lapho kuboniswa okugcwele okushicilelwa, isilinganiso esilinganisiwe, ukusebenzisana okutholakele, ukuvakasha kwephrofayli bese uchofoza kusixhumanisi se-Bio.
Kokuhleleka okubhalwe esigatshaneni esingenhla kufakwa ohlelweni lwe-funnel olusiza ukuthuthukisa umsebenzi owenzayo ku-Instagram.
Ukuvela kokusebenzisa indawo
Manje usungalinganisa ukuthi izithombe zakho zenketho yendawo zibukwe kangaki, okufanele uzengeze lapho uhlela isithombe. Futhi Indawo idlala indima ebalulekile ekubonweni nasekubukeni kokushicilelwa kwakho nokuningi uma kukhulunywa ngezindaba ze-Instagram.
Abanye abantu bazama izindawo ezahlukahlukene ukuthola ukuthi iyiphi esebenza kangcono kuzo.
Ngokuqinisekile uthole izincwadi ezinama-hashtag amaningi futhi ucabange ukuthi azisho lutho. Kepha empeleni akunjalo, empeleni, ziningi zalezi ezisunguliwe ukuze ukhiqize ukusebenzisana okuningi emphakathini. Lokhu kungenxa yokuthi ngamunye wabo uxhumeke komunye, ngakho-ke kwesinye isikhathi sibheka isithombe bese sicindezela esinye sazo kusiqondisa kokunye okuqukethwe okungenzeka nakho kungokunye umsebenzisi.
Indlela ama-hashtag athinta ngayo ukushicilelwa kanye nokwanda kwabalandeli abasha Zibuye zikalwe ngezibalo ze-Instagram.
1 Ungazi kanjani ukuthi ubani osindisa izithombe zami ku-Instagram?
1.1 Shintsha okwakho kube yiprofayili yebhizinisi
2 Sebenzisa izibalo ukwazi ukuthi ngubani owagcina izithombe zami ku-Instagram.
2.1 I-Instagram post izibalo
3 Ukuhlaziywa kwezibalo ze-Instagram
3.2 Khulisa abalandeli ngokuposa
3.3 Ububanzi bokushicilelwa
3.4 Bala ukubandakanyeka
3.5 Ukuvakasha kwephrofayili
3.6 Izinga lokuguqulwa kubalandeli
3.7 Ukuvakasha kwephrofayili kusuka ezincwadini zethu
3.8 Umshini wokuguqulwa
3.9 Ukuvela kokusebenzisa indawo
3.10 Ukuvela ngama-hashtag
Ikuphi imiyalezo eku-Instagram
Ungayithola kanjani i-akhawunti ye-Instagram